Manomboka ny fitrandrahana ny faritra lavitra amin'ny volana | i Sina Vaovao momba ny gadget
Manomboka ny fitrandrahana ny faritra lavitra amin'ny volana i Sina
John Louis Groves | | teknolojia
Araka ny nambara taloha ela be, dia nahomby tamin'ny fanatanterahana ny drafi-pikarohana rehetra eny an-habakabaka i Shina ary andro vitsy lasa izay dia natombok'izy ireo ny satelita vita batemy tamin'ny anaran'ny queqiao, izay niainga tamin'ny 05:30 ora teo an-toerana avy tao amin'ny foibe fandefasana Xichang, miorina eo amin'ny faritanin'i Sichuan (atsimon'ny firenena Aziatika). Mba handefasana ity zanabolana ity amin'ny Moon, ny Chinese Space Agency dia nampiasa roketa lava 4CC.
Tsy isalasalana fa miatrika ny iray amin'ireo dingana lehibe mahaliana indrindra izay efa nataon'ny olombelona isika, izay mifanitsy amin'ny dingana voalohany amin'ny misiona Chang'e 4 izany, ho fampahatsiahivana, milaza aminao fa ny tena tanjony dia ny hahafahana mijery ny lafiny miafina amin'ny Volana, mitovy amin'ny fomba nentim-paharazana ary avy amin'ny Tany dia tsy afaka jerena.
1 Ny zanabolana Queqiao dia hiasa ho toy ny tetezana amin'ny fifandraisana eo anelanelan'ny fanadihadiana izay hipetraka amin'ny lafin'ny volana sy ny foibe fanaraha-maso izay misy eto an-tany.
2 Ilay balafomanga Long March 4C, ankoatry ny zanabolana Queqiao, dia nitondra satelita sinoa roa sy antena serasera holandey nankany amin'ny Moon
Ny zanabolana Queqiao dia hiasa ho toy ny tetezana amin'ny fifandraisana eo anelanelan'ny fanadihadiana izay hipetraka amin'ny lafin'ny volana sy ny foibe fanaraha-maso izay misy eto an-tany.
Ny iraka lehibe tsy maintsy hotontosain'ny zanabolana Queqiao dia ny manompo tetezana eo anelanelan'ny mpandova an'i Chang'4, izay hiainga mankamin'ny faritry ny Volana amin'ny faran'ny fahavaratra, ary ny Tany dia ahafahan'ny fifandraisana eo anelanelan'ny foibe fanaraha-maso, miorina eo amin'ny planetantsika, ary ny fizahana fa, rehefa tonga ny fotoana, dia hiasa amin'ny lafin'ny Volana.
Mba hanatanterahana ity iraka tena lehibe ity, dia nitazona andiana antenady serasera miaraka amin'ny valin'ny masoandro ny Queqiao. Miorina amin'ny fanambarana nataon'i Zhang lihua, mpitantana tetik'asa:
Ny fandefasana dia dingana iray lehibe hahatratraran'i Shina ny tanjony amin'ny maha-firenena voalohany nandefa famotopotorana hipetraka moramora any amin'ny ilan'ny Volana.
Amin'izao fotoana izao, ny zanabolana Queqiao dia efa ao amin'ny fihodinana famindrana volana, izay handehanany mankany amin'ny toerany maharitra, mandrisika ny tenany noho ny herin'ny volana. Mandeha amin'ny antsipiriany bebe kokoa ary efa nambara, ny probe dia hiasa manokana avy amin'ny Lagrange point L2 an'ny rafitra Earth-Moon, toerana iray izay ho tratrarina ao anatin'ny herinandro vitsivitsy ary hamela azy hijanona eo amin'ny 65.000 kilometatra ambonin'ny haavon'ny volana sy 455.000 kilometatra miala ny planetantsika.
Ilay balafomanga Long March 4C, ankoatry ny zanabolana Queqiao, dia nitondra satelita sinoa roa sy antena serasera holandey nankany amin'ny Moon
Ho tsipiriany iray dia lazao aminao fa amin'ity iraka ity dia tsy vitan'ny hoe nampiasa ny balafomanga Long March 4C i Shina mba handefasana ny zanabolana fifandraisana Queqiao, fa koa ireo natao Batemy longjiang-1 y longjiang-2 ary koa antena holandey izay namaly ny fanafohezana ny NCLE (Mpandinika zina ambany ambany any Netherlands). Ny iraka ataon'ny zanabolana, araka ny efa nambara tamin'ny fomba ofisialy, dia mitaky ny fihodinana amin'ny Volana hanatanterahana andiam-panamarihana astronoma amin'ny halavan'ny halavan'ny ultralight. Ny angona nangonin'ireo zanabolana ireo dia hanampy ny mpikaroka hahafantatra tsara kokoa ny fiposahan'ny cosmic, izany hoe ireo fotoana nanombohan'ny hazavan'ny kintana voalohany.
Amin'ny toerana faharoa dia ahitantsika ny Antenna NCLE Holandey. Ity antena ity dia nalefa hamantatra ireo fambara onjam-peo malemy hatramin'ny niandohan'ny cosmos primordial, tamin'izany fotoana izany raha maizina sy mangatsiaka ary feno hidrôzenina izao rehetra izao. Noho ny fampiasana an'ity antena sarotra ity dia hanandrana ireo manam-pahaizana fakàna fahita matetika eo anelanelan'ny 10 sy 30 MHz, famantarana fa ety an-tany dia sakanan'ny atmosfera. Ity tetik'asa ity dia natolotry ny sehatra ho an'ny daholobe sy ny indostria tsy miankina holandey ary ara-bakiteny, rehefa nifampiresaka izy ireo dia manantena ny hanoratra toko vaovao amin'ny tantaran'ny astronomia noho ny fiaraha-miasa amin'ny fitantanan'ny sinoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Manomboka ny fitrandrahana ny faritra lavitra amin'ny volana i Sina
Ahoana ny fomba hamindra WhatsApp amin'ny karatra SD
Google dia voampanga ho nanambara tsy ara-dalàna ny anaran'ireo niharan'ny fanolanana